748 emadziro / VC
mubvunzo 748 emadziro / VC
2 makore mwedzi 1 apfuura #104 by Gh0stRider203
I wakatarisa zvose kumativi uye ndakararama ASI kuwana kwaye freeware paneeli kana rakapotsa nzvimbo yemutekenyi kuti ndinogona akaisa 748F kuti I dzinobhururuka (ndichatofanira kutsvaka kubatana Papera lol).
imwe Ndine anoshandisa default 747 Panel iyo Hey chero, kunoshanda ... asi ndinoda chaizvoizvo ndinoda kuwana vakadzikama VC. Ichokwadi, vandinowanzosangana achibhururuka 2d Panel asi Eh VC inonaka ikozvino uye nokuda kana une akanaka kwezuva kana parinonyura akakutungamirirai
2 makore mwedzi 1 apfuura #112 by aputech
Gh0st, ndotarira cockpits Ken Wigginton vake. Ndaiva nyaya chete, kuda nani 2D / VC nzvimbo yemutekenyi, uye iye akaita dzakawanda dzakanaka zvikuru, zvose Boeing uye Airbus zvakafanana.
2 makore mwedzi 1 apfuura #116 by Gh0stRider203
Ndichazozviona kuti .... ndatenda.
Time chokusika peji: 0.193 mumasekonzi